- Magalo- Saskatchewan
Saskatchewan (/ səskætʃəwən, sæ-, -wɒn / (Ku dhawaad ​​codka dhegaysta)) waa dhul ciriiri ah oo ciriiri galbeedka Kanada, gobolka keliya ee aan xuduuda dabiiciga ahayn. Waxay leedahay 651,900 oo kiilomitir oo isku wareeg ah (251,700 sq mi), ku dhawaad ​​10 boqolkiiba (59,366 kilomitir (22,900 sq mi)) waa biyo cusub, oo ka kooban inta badan webiyada, kaydka, iyo dhulalka 100,000 ee harooyinka.
Saskatchewan waxaa laga dhoofiyaa galbeedka Alberta, waqooyiga xudduudaha Waqooyi Galbeed, bari ee Manitoba, waqooyi bari waqooyiga Nunavut, iyo koonfurta waddamada Maraykanka ee Montana iyo Waqooyiga Dakota. Laga soo bilaabo dabayaaqadii 2017, dadka Saskatchewan waxaa lagu qiyaasey 1,163,925. Dadka degaanka ayaa inta badan ku nool gobollada koonfureed ee gobollada, halka badhkii waqooyi ee badhtamaha waqooyi ay badanaa la beero iyo si aan caadi aheyn. Wadarta dadka, qiyaas ahaan nus ayaa ku nool magaalada ugu weyn Saskatoon, ama caasimada gobolka Regina. Magaalooyinka kale ee la arki karo waxaa ka mid ah Prince Albert, Moose Jaw, Yorkton, Swift Current, North Battleford, Melfort, iyo magaalada xadka Lloydminster (qayb ahaan Alberta).
Saskatchewan waa dhul wabax leh oo leh masaafo balaadhan oo ah biyaha miyiga ah. Natiijo ahaan, cimiladeeda waa mid aad u xaddidan, oo soo jiidasho leh dhammaan gobolada oo dhan. Meelaha koonfureed waxay leeyihiin kulayl aad u kulul ama kulul. Midale iyo Yellow Grass meel u dhow xuduudka Maraykanka ayaa ku xiran heerkulka ugu sareeya ee laga diiwaan geliyey Kanada oo leh 45 ° C (113 ° F) oo lagu arkay labadii goobood ee July 5, 1937.  Xilliga jiilaalka, heerkulka ka hooseeya -45 ° C (-49 ° F) waa suurtogal xitaa koonfurta inta lagu jiro muddooyinka qabowga daran.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saskatchewan&oldid=222577"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Nofeembar 2021, marka ee eheed 00:20.